Sida Loogu Sameeyo Lacag ikhtiyaar ikhtiyaar ah Istaraatiijiyadda Socod? | vfxAlert official blog
«Socod»: istaraatijiyad fudud, macaash wanaagsan
Falanqaynta farsamadu waxay sii ahaanaysaa mid faa'ido leh, maxaa yeelay inta badan madal ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee ugu fiican ayaa ka shaqeeya. Tilmaamayaashu waa kuwo waqti-tijaabiyey waxayna awood u siinayaan bilowgayaasha inay ka ganacsadaan iyagoo adeegsanaya xeelado fudud sida «Walker».
Hantida ganacsiga : Wax kasta oo ikhtiyaarro ah ayaa tilmaamaya ganacsiga. Shuruudda ugu weyni waa mid go'an (2-3 dhibcood) oo aan lahayn khidmado qarsoon.
Kordhinta (EMA) Celceliska Dhaqdhaqaaqa ee leh 35 . Tilmaamayaasha isbeddelka oo aan ku go'aaminno barta furitaanka ee ikhtiyaarka. Istaraatiijiyaddan looguma talagalin ka ganacsiga inta lagu jiro xilliyada guryaha. Waxaan ka ganacsannaa oo keliya haddii kala-soocgu u dhexeeyo ugu yaraan 15-25 dhibcood!
RSI oo leh 14 iyo heer dheeri ah 70/30 . Tilmaamayaasha is -beddelka ah waa qasab in la xaqiijiyo ugu yaraan hal oscillator oo tilmaamaya xad -dhaaf ah, marka iibsadayaashu aysan mar dambe kor u qaadi karin sicirka, ama dib -u -iibin halkaas oo ku dhawaad aysan jirin qof suuqa ku iibiya qiimo jaban. Ha isticmaalin 60 ganacsi laba -geesood ah !
Top calaamadaha binary:
Xulashada UP (WAC) . Qiimuhu wuxuu ka sarreeyaa Celceliska Guuritaanka ama wuxuu ka dillaacaa xagga hoose. MACD wuxuu ka sarreeyaa heerka eber, RSI wuxuu u socdaa aagga xad -dhaafka ah (heerka 70).
Xulashada DHAQAN (GUDBIN) . Calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee iska soo horjeeda: Qiimuhu wuxuu jebiyaa Celceliska Dhaqaaqa kor ilaa hoos ama hoos ayuu u socdaa. MACD wuxuu ka hooseeyaa eber, RSI wuxuu u leexday aagga la dul -maray (heerka 30).
Furan ganacsi shumaca xiga kadib ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah calaamado lacag la’aan ah. Wakhtiga uu dhacayo ikhtiyaarradu waa inaysan ka yarayn 15-20 daqiiqo xitaa haddii waqtiga shaqada loo doorto 5 daqiiqo, sida fiidiyahayaga .
In kasta oo aad ka ganacsan karto maalinta oo dhan, natiijooyinka ugu faa'iidada badan waxay ahaayeen Yurub (06:00 - 16:00 UTC) iyo qeybtii labaad ee fadhigii Ameerika (laga bilaabo 16:00 UTC). Hubi in istiraatiijiyaddu ay shaqeyso iyadoo la adeegsanayo ikhtiyaarka ikhtiyaariga ikhtiyaariga ah .
Inta lagu jiro daabacaadda wararka aasaasiga ah iyo tirakoobyada muhiimka ah, ma furi karno ikhtiyaarrada 30 daqiiqo ka hor warka iyo 30 daqiiqo kadib daabacaadda; ganacsatada taxaddar leh ayaa xiri kara heshiisyada hadda jira. Si loo xakameeyo dhacdooyinka, waxaan u adeegsanaa jadwalka dhaqaalaha ee ku jira dhammaan xulashooyinka ikhtiyaariga ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah !
Isbeddel xooggan kadib, RSI, sida oscillator -ka kale ee la -dul -maray / ka badan, wuxuu "ku tuman karaa" meelaha muhiimka ah ama meel u dhow heerka 50 muddo dheer isaga oo aan ka tallaabin. Isla mar ahaantaana, EMA waxay siin kartaa calaamado xooggan xulashooyinka furan. Haddii la aqbalayo calaamadaha ganacsiga xorta ah ee ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah iyo haddii kale, qof walba waa inuu go'aansadaa naftiisa, laakiin weli way u fiican tahay kuwa bilowga ah inay sugaan barta gelitaanka oo dhammaystiran.
Haddii dillaaliyuhu bixiyo inuu xiro ikhtiyaarka ka hor dhicitaanka, waan samaynaa (xitaa haddii ay macaash ku jirto!) Marka calaamadda ikhtiyaar ikhtiyaar ee ikhtiyaarka ugu fiican ay soo baxdo - soo noqnoqoshada soo noqnoqoshada Celceliska Dhaqaaqa oo leh isbeddel degdeg ah ama qaraabo ah xagga histogram -ka MACD.
Aan soo koobno . Istaraatiijiyadda “Socod” waxay muujinaysaa ku -habboonaanta aaladaha falanqaynta farsamada ee aasaasiga ah labadaba nooca gacanta iyo ikhtiyaarka ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah . Waxaa muhiim ah in la xusuusto mabda'a aasaasiga ah ee istaraatijiyad kasta - hal qalab ma noqon karo doodo lagu furayo heshiis. Waxaan mar walba raadineynaa xaqiijin dheeraad ah !